Nagu saabsan - Huizhou Winmax Sport Co., Ltd.
Anagoo ah alaab -qeybiyihii ugu weynaa Shiinaha ee sabuuradha iyo miisaska ciyaarta, waxaan nafteena u hurnaa inaan siino xal hal joogsi ah dhammaan bilyaarradaada iyo baahiyahaaga ciyaaraha.
WIN.MAX waxay u taagan tahay 'Dhammaan Ciyaaraha' waxayna had iyo jeer ku dadaalaysaa inay wax cusub samayso, iyadoo leh badeecad baaxad leh oo daboolaysa qaybaha kala duwan ee ciyaaraha iyo ciyaaraha.
Anagoo ah alaab -qeybiyihii ugu weynaa Shiinaha ee sabuuradha iyo miisaska ciyaarta, waxaan nafteena u hurnaa inaan siino xal hal joogsi ah dhammaan bilyaarradaada iyo baahiyahaaga ciyaaraha. Waxaan sidnaa miisaska barkadda, miisaska foosball -ka, miisaska tennis -ka miiska, miisaska xeegada, boodhadhka, boodhadhka elektaroonigga ah, alaab -gacmeedyada iyo in ka badan oo Shiinaha ah. Waxaan u haynaa carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn.
Ma aha oo kaliya inaan dejino heerarka warshadaha tayada laakiin sidoo kale naqshad casri ah. Waxaan sidoo kale si joogto ah u ballaarineynaa waxsoosaarka alaabtayada si aan ula kulanno dalabaadka sii kordhaya ee macaamiisheena.
WIN.MAX Sports waxay badeecadeeda si toos ah ugu iibisaa macaamiisha iyada oo loo marayo dukaamada sumadda, xarumaha warshadaha, iyo ganacsiga elektaroonigga ah iyo iyada oo loo marayo macaamiisha ganacsiga silsiladaha alaabta isboortiga, tafaariiqleyaasha takhasuska leh, baayacmushtarrada ballaaran, naadiyada jirdhiska iyo qaybiyaasha. Bishii Diseembar 2020, WIN.MAX Sports waxay leedahay urur iib oo iska leh 20 waddan.
Cabbirka Warshadda 5,000-10,000 mitir murabac
Dalka/Gobolka Warshadda Dabaqa 2, No. 6 Dhismaha, No. 49, Zhongkai 2nd Road, Huizhou City, Gobolka Guangdong, Shiinaha
Sannad La Aasaasay 2013
Nooca Ganacsiga Soo -saaraha, Shirkadda Ganacsiga
Tirada Khadadka Wax -soo -saarka 3
Warshadaynta Qandaraaska Adeegga OEM Oo La Bixiyay
Qiimaha Soo Saarka Sanadlaha ah US $ 5 Million - US $ 10 Million
Awoodda R&D Waxaa jira/ka yar 5 Qof R&D Injineer (yaasha) shirkadda.
Kooxdayadu waxay ka kooban tahay shaqaale khibrad u leh suuqan, oo ku jira safka ganacsi ee la midka ah 10kii sano ee la soo dhaafay. Kooxdayada dadka wax iibiya ayaa iska leh aqoonta suuqa waxayna xiriir wanaagsan la leeyihiin macaamiisha.
Waxaan ku jirnaa hawlgal aan ku caawineyno qaybiyaha si ay u hormariyaan meheraddooda oo aan u helno faa'iidooyin tartan leh taageerada alaabadayada.
Waxaan nahay Shirkadda Alaabada Ciyaaraha Waxaan nahay WIN.MAX.
WINMAX waa astaanta diiradda saareysa in la siiyo Baaxad buuxda ee Alaabada Isboortiga Madadaalada Tayada Sare leh.